Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Astaamaha ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Doolarka Mareykanka (USD) wuxuu sii wadaa inuu haysto cinwaanka lacagta dejinta ugu weyn ee dhaqaalaha adduunka, in kasta oo lacagta euro-da iyo sii kordheysa saamaynta Shiinaha ee Yuan, gaar ahaan gobolka Koonfurta Aasiya. Isbeddel kasta oo ku yimaada xaaladda dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha ee Mareykanka wuxuu horseedaa dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka socda suuqa Forex. Qof kasta oo ka fakara sida loo sameeyo lacag ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu u baahan yahay inuu fahmo waxa saameynaya sicirka sarifka doolarka.
Haddii aadan tixgelin siinin dagaalada ganacsi ee lala galo Shiinaha iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale ee Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ay tahay inuu xalliyo, dhammaan arrimaha dibedda ee saameynaya sarrifka doollarka waa mid ama qaab kale oo la xiriira qiimaha saliidda. Sawirka wuxuu muujinayaa garaafka qiimaha ee WTI (West Texas Intermediate, Light Sweet) - saliid laga soo saaray Texas oo leh maadada baaruudda oo hooseysa.
Wax soo saarka intiisa badan waxaa laga isticmaalaa gudaha Mareykanka, sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa dhuumo ilaa Latin America si howsha loo sii wado. Waxay ku fadhidaa wax ka yar 1% wax soo saarka adduunka, iibintooda waxay saameyn ku yeelaneysaa dhaqaalaha wax ka yar wadamada ay wax soo saarka saliidu tahay isha ugu weyn ee dakhliga, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo marka la falanqeynayo waxa saameynaya heerka sarifka dollarka.
Hoos u dhaca ku yimid qiimaha wax soo saarka saliida shaal oo ku dhowaad 5 jeer laga soo bilaabo bilowgii horumarinta beerta sanadkii 2012 yr. waxay keentay xaqiiqda ah in qaybtan ka mid ah dhoofinta Mareykanka ay saameyn sii kordheysa ku yeelan doonto istaraatiijiyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee USD iyo binary .
Waxa kale oo jira dhisme firfircoon oo terminal cusub oo laga samaynayo xeebta Gacanka Mexico si saliid loogu diro suuqa caalamiga ah. Ku guuleysiga hirgelinta mashruuca ayaa u oggolaan doonta Mareykanka in laga takhaluso xaaladda dhoofinta gobolka, iyo xigashooyinka WTI ayaa door muhiim ah ka qaadan doona go'aaminta qiimaha tamarta adduunka.
Waxa ugu horreeya ee saameeya sicirka doolarka ayaa noqon doona khudbadaha madaxa FedReserve ee ku saabsan arrimaha ugu waaweyn ee siyaasadda maaliyadeed iyo deynta hadda iyo mustaqbalka. Suuqyada lacagaha iyo suuqyada saamiyadu aad bay u deggan yihiin xilligan. Mawduuca iyo jawiga guud ee khudbadaha waa qarsoodi yihiin, waana adag tahay in la sii saadaaliyo halka uu suuqa u mari doono iyadoo lagu saleynayo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. U guuritaanka wararka dhaqaalaha iyo tirakoobka:
Go'aanka Qiyaasta FED
Heerka dulsaarku waa mid kamid ah aaladaha ugu muhiimsan ee lagu maareeyo nidaamka bangiyada. Go'aanka lagu beddelayo ama lagu joogteeyo heerka dulsaarka waxaa leh Guddiga Siyaasadda Dhaqaalaha ee FedReserve. Sare u kaca sicirka ayaa saameyn aad u xun ku leh doolarka.
Forex: isbeddelka sicirka sarrifka ee ku dhowaad dhammaan hantida lacagaha ka dib markii warka la daabaco waa ugu yaraan 70-100 dhibcood, labada lamaane ee EUR / USD waxay gaari karaan dhibcaha 200-300. Doolarka Kanada waa ka reeban yahay - waxay muujineysaa falcelin deggan, ugu badnaan USD / CAD ma ahan wax ka badan 40-50 dhibcood.
Daqiiqadaha Kulanka FOMC
Warbixinta ugu dambeysa ee kulanka guddiga maaliyadeed ee FedReserve, oo dulsaarka hadda jira lagu hagaajin karo haddii arrimo cusub oo dheeri ah oo dheeri ah ay soo if baxeen ama aan la tixgelin tan iyo sababihii hore, badanaa ma dhacaan.
Forex : falcelinta suurtagalka ah ee calaamadaha ganacsiga nool ayaa u xoog badan sidii daabacaaddii ugu horreysay ee heerka dulsaarka. Xaaladdan oo kale, sicirka sarrifka USD / CAD ma muujinayo isbeddello muhiim ah.
Waxsoosaarka Guud ee Gudaha (GDP)
Tusmo muujineysa isbeddelka wadarta mugga badeecadaha / adeegyada loo soo saaray dhoofinta iyo isticmaalka gudaha ee la xiriira xilligii dejinta hore. Xogta hordhaca ah ayaa la daabacayaa marka hore, inta badan waxay saameyn ku yeelaneysaa USD inta lagu jiro maalinta ganacsiga ee hadda jirta, ka dib waa la saxay laba jeer oo isbeddelka usbuucyada 1-2 ee soo socda ayaa cad. Lacagta qaranku had iyo jeer waxay ku sii xoogeysataa kobaca wax soo saarka waddanku, si waafaqsanna, way sii daciifaysaa markay hoos u dhacdo.
Muhiim u ah istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee Forex : falcelinta ugu badan waa 150-250 dhibcood ee lammaanaha ugu waaweyn, celcelis ahaan, isbeddelka qaddarka ee kala soocyada soo socda:
EUR / USD, GBP / USD: 60 dhibcood;
NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF: 40-50 dhibcood;
USD / CAD, USD / JPY: illaa 40 dhibcood.
Farqiga u dhexeeya mugga dhoofinta iyo soo dejinta alaabada muddada warbixinta. Isu dheelitirku waa mid hagaagsan (firfircoon) haddii dhoofinta ay ka badato soo dejinta, iyadoo la xoojinayo dollarka Isku dheelitirnaan taban (passive) ah, sicirku wuxuu bilaabmayaa inuu hoos u dhaco. Xogta waxaa la sii daayaa bil kasta tobanka sano ee saddexaad (badiyaa Khamiista).
Forex : saameyn xoogan oo kaliya Euro iyo Pound: celcelis ahaan dhibcaha 50 ee GBP / USD, illaa 200 ee EUR / USD, haddii xogtu si weyn uga duwan tahay saadaasha. Hantida inteeda kale, waxaa jira dhaqdhaqaaq daciif ah oo ah 30-40 dhibcood.
Mushaharka Aan Beerta Ahayn (NFP)
Tilmaamaha ugu weyn ee heerka shaqo ee Mareykanka. Falanqeeyayaasha, waxaa jira fikrad ah in koror kasta oo tirada dadka shaqeeya ee 200 kun ay sababaan kororka waxsoosaarka ee 3.0%. Waxaa la daabacay Jimcaha ugu horeeya ee bishaan, tarjumaadaha ayaa suurtagal ah oo la xiriira ciidaha iyo dhacdooyinka kale ee muhiimka ah.
Muhiim u ah calaamadaha binary otomaatiga ah : Dhammaan wararka iyo tirakoobka USD, waxay ku leedahay saamaynta ugu xoogan suuqa sarifka lacagaha qalaad. Waxay u horseedi kartaa oo keliya kicinta muddada-gaaban ee dhibcaha 150-200 ee dhammaan lamaanaha, laakiin sidoo kale waxay u horseedi kartaa sameynta isbeddello cusub oo muddada-dhexe ah. In kasta oo badanaa la arki karo in xitaa dhacdooyinka noocan oo kale ahi ay leeyihiin saameyn muddo-gaaban ah, saacadaha 4-6 qiimaha ayaa ku soo noqonaya heerarkii hore.
Sheegashooyinka Shaqo La'aanta Hore (Heerka Shaqo La'aanta)
Waxay si isku mid ah ula soo baxaan NFP: bilowga hore wuxuu muujinayaa boqolkiiba intee boqolkiiba dadka shaqo la'aanta ah ay ka yihiin wadarta tirada shaqaalaha, codsiyada, isbaddalkooda toddobaadlaha ah bishii la soo dhaafay. Waxaa loo adeegsaday falanqaynta suuqa shaqada ee waaxda beeraha. Sidoo kale, iyada oo ku saleysan isbeddelka isbeddelka ee tirada codsiyada, waxaad isku dayi kartaa inaad saadaaliso NFP ee soo socda, taas oo macnaheedu yahay sicirka USD: haddii Sheegashooyinka Jobless ay si joogto ah u yaraadaan, waxaa loo qaadan karaa in NFP ay ka sarreyso saadaasha iyo ka soo horjeedka .
Forex : arrimahan waxaa lagu sifeeyay inay yihiin «daciif» calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee dhabta ah: ee Euro iyo Pound 20-30, ma jiraan wax jawaab celin ah oo ku saabsan USD / CAD, AUD / USD iyo NZD / USD.
Sahan joogto ah oo ku saabsan doorbidyada hadda iyo mustaqbalka ee 5,000 ee qoysaska Mareykanka ah, oo la daabaco bil kasta wixii ka dambeeya 20-ka. Waxaa loo adeegsadaa inay ka mid tahay halbeegyada lagu saadaaliyo xaaladda shaqada iyo xaaladda guud ee dhaqaalaha. Kobaca ayaa saameyn togan ku leh doolarka.
Forex : tusaha, sida dhammaan arrimaha dhaqaalaha gudaha ee USA, kama bixinayo jawaab celin xoog leh labada lamaane ee ugu waaweyn, ugu badnaan 30-40 dhibic jiho kasta. Marka suuqa uu mala-awaal badan yahay, kacsanaan ah 130-150 dhibcood ayaa suurtagal ah, waxaa lagu talinayaa in laga boodo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Kadib, saacado yar gudahood, qiimaha badanaa wuxuu ku soo laabtaa heerarka asalka ah.
ISM Waxsoosaarka / Waxsoosaarka PMI
Indices-ka waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka sahaminta maamulayaasha 4,000 shirkadood ee qaybaha ku habboon, iyadoo la qiimeynayo isbeddelka xaaladda suuqa iyadoo la raacayo shuruudaha "ka fiican / ka xun / aan isbeddel lahayn". Qeybta wax soo saarka, heerarka alaabada, shaqada, waqtiyada dirista, iyo qiimaha dhoofinta / soo dejinta ayaa lagu daray qiimeyn.
Waxaa la rumeysan yahay in saameynta qiimaha doolarka ee qiimayaasha ka weyn 50% ay noqon doonto mid wanaagsan, maadaama tani ay muujineyso kororka dhaqdhaqaaqa ganacsiga, in ka yar 50% ee kororka saameynta xun ee USD. Waxaa la daabacaa maalinta shaqada ee ugu horreysa bil kasta.
Forex : + 50% / - 50% saamayn badan kuma lahan saamaynta lacagaha waaweyn. Dhaqdhaqaaqyada adag waxay ka bilaabmaan 60% iyo wixii ka sareeya marka laga hadlayo «kuleyl» qaybta, kor u kaca sicir bararka iyadoo dib loo eegay sicirka FedReverse iyo 40%, taas oo muujineysa hoos u dhaca suuqa. Xaaladahaas, dhaqdhaqaaqyo fiiqan illaa 150-200 dhibcood ayaa suurtagal ah; istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inay tan ku xisaabtantaa
Heerka doolarka - wuxuu tilmaamayaa xasilloonidiisa
Qeybtii hore, waxaan tixgelinnay saameynta xaaladda Mareykanka ee heerka USD iyo guud ahaan suuqa Forex, laakiin, sida geeddi-socodyada kale ee dabiiciga ah, waxaa jira xoog iska caabin ah. Si loo qiimeeyo sida doolarku u egyahay marka loo eego lacagaha kale, waxaa la soo saaray tusmo gaar ah.
Tusmada (DXY, USDX) waa dambiil lacago badan ka kooban oo loogu talagalay qiimeyn deg deg ah oo ku saabsan xooggiisa ama daciifnimadiisa. Lacag kasta oo dambiisha ku jirta waxay leedahay miisaan kala duwan. Marka loo eego qorayaasha qalabkan, gobolka yurub, oo ah meesha ay kuwada noolaayeen shuraakada ganacsi ee waqtigaas, ayaa saameyn weyn ku leh dollarka. Labada lamaane ee kale ee waaweyn, kaliya Yaananka Japan iyo doolarka Kanada.
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in saamaynta gobolka Aasiya iyo Baasifigga (Australia, Taiwan, Kuuriyada Koonfureed, Shiinaha) aan lagu xisaabtamin, tusmada waxaa loo isticmaali karaa inay tahay cunsur istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh, in kasta oo ay ku siin karto qallooc macluumaadka marka Euro uu galo xilli isbeddel badan.
Falanqeeyayaasha dhexdooda, waxaa jira fikrad - markii heerka USDX uu kordho 10%, waxay la macno tahay hoos u dhac ku yimid qiimaha guud ee hantida adduunka oo ah $ 1 trillion .
Qiimayn sax ah oo ku saabsan xaaladda doollarka, waxaa fiican in la isticmaalo mid ka mid ah aaladaha FED: Tilmaanta Ganacsiga ee Miisaankeedu Yahay (TWDI). Waxay ka kooban tahay lacago aan lagu darin xisaabinta aasaasiga ah ee USDX sidaa darteed saameynta isbeddelada fiiqan ee xaaladda ka jirta Eurozone ee USD ay ka yar tahay mid muhiim ah.
Markaad falanqeyneyso dhaqdhaqaaqa tusmada, marwalba xusuusnow - tani waa tilmaame dhaqameed dhaqaale, sidaa darteed, saadaasha la aqbali karo ee sida doolarku u dhaqmi doono ayaa suuragal ah oo keliya maalin walba, toddobaadle iyo bil kasta. Calaamadaha ugu xoogan ee isbeddelka isbeddelka isbeddelka adduunka ayaa noqon doona dhaqdhaqaaqa kaladuwanaanta jaantusyada USDX iyo labada lamaane ee EUR / USD .
Waxyaabaha liistada liistada ku leh ee saameynaya heerka doolarka ma ahan liistada ugu dambeysa ee sababta calaamadaha u ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikiyaaraa ah ku leh labada lamaane iyo USD. Kuwani badanaa waa tilmaamayaal dhaqaale, laakiin waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso sarrifka saamiyada iyo dhinacyada mala awaalka ah, sida xiriirka ka dhexeeya suuqyada saamiyada iyo sarrifka lacagaha qalaad. Waa xaqiiqo caan ah in isbeddelka qiimaha mustaqbalka lacagta (qaabkan, tusmada doolarka sidoo kale la ganacsado) laga yaabo inay saameyn dib u dhac ah ku yeelato Forex, calaamadaha noocan oo kale ah ayaa si guul leh loogu isticmaali karaa ganacsiga.